Thwebula Line 6.8.2 – Android – Vessoft
Line – a software ukuxhumana phakathi kwabasebenzisi emhlabeni wonke. Izici main of the software zihlanganisa: exchange of the text messages, izwi kanye video yezokuxhumana, imeyili yezwi, exchange of izithombe, njll Line ikuvumela ukudala ingqungquthela noma iqembu izingxoxo, wazise abangane mayelana nemicimbi eyahlukahlukene nge izindaba feeds bese baveze imizwelo by enana ukumamatheka. Isofthiwe kwenza ukuba ubhalise futhi nizibhale osaziwayo ozithandayo, imiphakathi kanye TV. Line futhi liqukethe yangaphakathi esitolo thay ikuvumela ukuba ukunweba iqoqo ukumamatheka okujabulisayo funny stickers nomfanekiso abalingiswa abadumile.
Ikhono ubhalisele emphakathini various
Isethi Large of ukumamatheka ezithakazelisayo